Ukuthuthukiswa okusheshayo yokuxhumana Internet umsebenzi lisibeka izimo enhlanganweni ezahlukene izinhlobo zokuxhumana phakathi abasebenzisa izingosi zokuxhumana. Kuze kube manje, abantu abaningi babe akwanele ukushintshashintsha imiyalezo, futhi uma ungafuni ukubona ke, okungenani, ukuzwa umngane wakhe izwakale samimEto kungenzeka, isibonelo, umsindo Umsebenzisi amazwana imibhalo ehlukahlukene kanye namavidiyo. Ngaphezu kwalokho, lapho esebenza ezihlukahlukene izicelo multimedia kungadinga umsindo orekhodiwe, futhi kukhona isici ewusizo kakhulu, njengoba isihlonzinkulumo. Ngenxa wakhe, unganikeza imiyalelo yezwi computer ngisho balawule umbhalo. Konke lokhu kuholela umbuzo abahlale bembuza wona yomnikazi, "ukuthi ungasetha kanjani i-microphone kwikhompyutha yakho?". Yiqiniso, i-master abanolwazi akunzima, kodwa imfundamakhwela "umsebenzisi" kungaba nenkinga enkulu wakubonisa lokhu. Nakuba, uma wazi ukuqala lapho, impendulo yombuzo othi "indlela ukusetha i-microphone kukhompyutha yakho" akunzima ikakhulukazi. Ngakho, izinto zokuqala kuqala:
Indlela ukuxhuma microphone:
Okokuqala, kumelwe uthenga i-mic uqobo. Izinga ikhompyutha imibhobho ngokuvamile eze ngezinhlobo ezimbili zamakhiwane nezixhumi uxhumano. Lena umsindo mini jek 3.5 mm (minijack), kuyinto evamile ukuxhuma multimedia ne-USB ukuxhuma (USB evamile okokufaka). Ngaphezu kwalokho, hhayi chassis ufuna slot ekhethekile, emakwe «MIC IN» - lena umbhobho okokufaka ekhethekile. Itholakala kungaba iphaneli phambi (ngokuvamile eduze isixhumi yomsindo ku kukholamu «Audio OUT»), ngakho ingxenye ezingemuva izindlu. USB Isixhumi Ukuze kube lula abasebenzisi ngezinye izikhathi onikezwe aphambi komtshina. Aphathekayo, lezi nezixhumi avame ohlangothini. Xhuma i-microphone ukuze izidleke wathola futhi ukusebenzisa umshini. Emva ukulanda run "entsha Iseluleki imishini Uxhumano", njengoba uxwayisa ilebula okuhambisanayo esikrinini. Okulandelayo, kufanele nje ulandela iseluleko sakhe. Ngezinye izikhathi kungase kudingeke ukuba uxhume i-microphone, isibonelo, i-karaoke, uma ungafuni ukuthenga abezindaba ezikhethekile. Kube ngezinye izikhathi kwenzeka isixhumi jek standart, okuyinto ezinkudlwana ngobukhulu kuka 3.5 mm minijack. Lokhu umbhobho kungenziwa exhunywe kuphela ngokusebenzisa adaptha ekhethekile, ithengiswe ngokukhululekile ezitolo ezikhethekile.
Indlela ukusetha i-microphone kukhompyutha yakho ngesandla:
Ezimweni eziningi, izinkinga ahlanganiswe imakhrofoni asivelanga futhi ngokuzenzakalelayo amisiwe "master Windows». Kodwa uma kuseyinkinga ke kuthebhu "Sound" e "Control Panel" yama-computer, ungabona kanjani umbhobho axhunyiwe. Uma kukhona umkhaza "ukukhetha okuzenzakalelayo", khona-ke kumelwe uqiniseke ukuletha ngokuchofoza igundane emkhakheni ezifanele,. Modern hardware yokulungisa ku iningi igcwaliswe esakhelwe ikhadi umsindo, kodwa nje uma kubalulekile ukuqiniseka ukuthi kuba. Esikhathini "Isiphathi sedivayisi" PC yamathuluzi, ungabona uhlu wonke amadivaysi atholakalayo ekucushweni, kuhlanganise khona nohlobo ikhadi umsindo. Ukuchofoza inkinobho yegundane kwesokudla ungakwazi vula imenyu bese uhlole ukuthi lusebenza. Uma inkinga iqhubeka ne "Iseluleki se-Windows» Tips, kungcono ukuxhumana sesevisi.
Indlela ulungiselele microphone kwi headset:
Amamodeli multimedia-headphone, ifakwe umbhobho esakhelwe, ifakwe zokungena ezimbili futhi ngokuvamile ekilasini 3.5 mm minijack. Microphone okokufaka libhaliwe abomvu, kanye sivuno izinkomishi indlebe - oluhlaza. Slots elihambisana uxhumano zitholakala uhlale khona, into esemqoka - ungayididanisi Imigudu. Ukuze kube lula jack okokufaka ngokwabo ezifanayo umbala esephepheni. Jikela kokubili nezixhumi ku enethiwekhi eyenzelwe kubo, bese senza ngokuvumelana isikimu ngenhla.
Uma ngesikhathi ukufakwa nokulungiswa kwe-microphone kanye ama-headphone unemibuzo, ungahlala ukubiza ingxenye ekhethekile search Windows Usizo "ukuthi ungasetha kanjani i-microphone kukhompyutha" noma "ukuthi ungasetha kanjani i-microphone ku-headphones."
ReadyBoost - kuyini? ReadyBoost i-Windows XP
Isiphi isimiso ayihambisani le von Neumann izakhiwo? Kanjani umshini imisebenzi von Neumann?
Uyini strudel? Strudel ngomumo Puff khekhe